Fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana | Fiaretana haran-dranomasina
Firenena maro no manana lalàna mifehy ny tontolo iainana izay mitaky famerenana ny mety ho fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny fikasana alohan'ny hamoahana alalana avy amin'ny governemanta (ohatra, ny lalàna mifehy ny tontolo iainana nasionaly amerikana). Ny fanombanana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana dia azo faritana ho "ny fizotry ny fanombanana sy ny fanalefahana ny vokatra biofizika, sosialy ary hafa mifandraika amin'ny tolo-kevitra momba ny fampandrosoana alohan'ny fanapahan-kevitra lehibe raisina na fandraisana andraikitra". ref Ny fanombanana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana dia matetika ampiharina, ary mety ilaina indrindra, amin'ny tranga mety tsy ahitan'ny firenena lalàna mifehy tsara momba ny fambolena sy fiompiana izay mamaritra mazava na manery izay asa avela sy ny fomba fiasa anaty rano no azo avela.
Dingana fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana. Sary © The Conservancy voajanahary
Misy dingana lehibe maromaro izay mazàna amin'ny dingana fanombanana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana:
Screening sy scoping: Dingana voalohany dia ny famaritana raha ilaina ny fanombanana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana ary raha toa izany, na fanombanana feno na famerenana voafetra no ilaina. Ity fanapahan-kevitra ity dia amin'ny ankapobeny dia miorina amin'ny fanombanana ny maha-zava-dehibe ny risika eo amin'ny tontolo iainana ary mety hateraky ny toetra lehibe amin'ny tetik'asa momba ny fiompiana anaty rano toy ny habe, ny toerana, ny karazan-javamaniry nambolena, ary ny fanao mitombo natolotry ny asa fiompiana anaty rano. Matetika ny firenena dia mametraka ambaratonga momba ny haavon'ny fijerena ny tontolo iainana takiana sy ny fampahalalana izay tsy maintsy aseho ao anatin'ny fanombanana ny tontolo iainana. Ny fanombanana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny dia takiana amin'ny ankapobeny momba ny fiompiana akondro anaty akondro izay afaka manana fiatraikany lehibe amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Ny famerenana kely kokoa amin'ny antsipiriany dia mety takiana amin'ny fizahana hazandrano bitika kely kokoa, na amin'ny fomba fiasa tsy dia misy akony firy toy ny kolontsaina ahitra na ahidrano. Ny firenena dia mety misafidy ihany koa ny hamita ny tombam-bidy momba ny tontolo iainana "programme" ho an'ny karazana kolontsaina manokana na habe, toy ny efa nanaovana ny fandinihana ny tontolo iainana ankapobeny, amin'ireny ny fanalefahana ny fanadihadiana ho an'ireo mpangataka tetikasa amin'ny karazana fambolena na karazan-kolontsaina mitovy amin'izany ary mampihena ny enta-mavesatra fitantanan'ny governemanta.
Fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny tontolo iainana: Ny mpangataka fahazoan-dàlana na mpandraharaha iray izay raisin'ilay mpangataka fahazoan-dàlana (ary ankatoavina matetika hanao asa amin'ny maso ivoho fitantanana) dia hampivelatra ny tombana amin'ny tontolo iainana. Ny masoivoho fitantanana dia mamaritra ny fampahalalana izay ilaina hangonina manerana ireo faritra misy fiantraikany lehibe, izay tombana ary aseho amin'ny tatitra iray. Ho an'ny fampandehanana trondro dia mety misy ny fepetra takiana amin'ny fanombanana ny salan'isa, ny fanadihadiana amin'ny tranokala, ny maodelin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitondra ary ny loza mety hitranga amin'ny toeram-ponenana, karazana voaaro ary tahiry trondro, ankoatry ny olana hafa. Matetika ny tatitra dia misy fanombanana ireo soso-kevitra naroso ho an'ilay tetikasa araka ny voalaza.
Fifandraisan'ny mpandray anjara: Ny fanehoan-kevitra ampahibemaso dia matetika avela na takiana amin'ny alàlan'ny dingana marobe amin'ny fizahana ny tontolo iainana, mandritra ny dingana mialoha, alohan'ny hamoahana ny fanambarana ny fiantraikan'ny tontolo iainana, ary raha vantany vao vita ny volavolan-taratasy momba ny fanombanana ny tontolo iainana.
fanalefahana: Ny drafitra fitantanana ny tontolo iainana na ny fanalefahana dia mazàna vokatry ny fanombanana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana, na dia misy aza ny fanalefahana mitombo hatrany amin'ny alàlan'ny fitsipika mahazatra.
Fanapahan-kevitra: Ny fanapahan-kevitra farany momba ny famoahana fahazoan-dàlana dia alaina amin'ny sampan-draharaha mifehy.
Fanaraha-maso: Ny fanaraha-maso maharitra ny fiantraikan'ny tontolo iainana (oh: ny rano maloto, ny fiantraikan'ny bibidia) amin'ny asa iray dia mety hitranga amin'ny fanambarana ny fiantraikan'ny tontolo iainana.
Ireo firenena dia mety mamorona lalàna manokana momba ny sehatry ny fiompiana trondro toy ny, na ho solon'ny fizotran'ny fanombanana ny tontolo iainana. Ny sasany amin'ireto fitsipika ireto dia mety misy:
Safidy karazan-karazany - tsy mampiasa afa-tsy karazan-jaza na karazan-javaboary ary fady amin'ny kolontsain'ny karazan-javamaniry manafika na anaty rano
Ny maodely hamaritana ny fetran'ny fahafaha-mitondra ny faritra - manao fanadihadiana mba hamaritana ny isan'ny tranom-borona azon'ny faritra iainana maharitra nefa tsy misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy fetran'ny fetran'ny faritra na faritra voafaritra
Ferana ny famoahana, fifehezana ny kalitaon'ny rano / rano ary fanaraha-maso - raha jerena ny habetsahan'ny fantson-drano sy ny kalitaon'ny rano miditra sy mivoaka. Ny masontsivana momba ny rano / simika toy ny oxygen, PH, turbidity ary amoniaka dia araha-maso ary fehezina ao anatin'ny fetra voafaritra ao amin'ny faritra famokarana.
Vokatry ny bénthika, sedimentation ary fahasimban'ny toeram-ponenana - fisafidianana toerana araka ny tokony ho izy, fitakiana onja, halaliny
Fihemorana amin'ny toeram-ponenana na fetran'ny fahasimban'ny toeram-ponenana - mipetraka lavitra azo antoka amin'ny haran-dranomasina (izany hoe 200 m)
Biomass / stocking density - hakitroky fitehirizana ambony indrindra isaky ny tranom-borona / toeram-piompiana arakaraka ny toetran'ny tranonkala
Fomba fitantanana hafa amin'ny toeram-piompiana - ferana amin'ny fampiasana karazan-tsakafo sasany sy fitantanana famahanana tsara mba hisorohana ny fihinanan-kanina sy fandotoana be loatra; fanadiovana araka ny tokony ho izy ny tranom-borona mba hialana amin'ny aretina
Fampiasana zava-mahadomelina sy simika - fitsipika hamaritana ireo karazana zava-mahadomelina sy zavatra simika alain'ny biby, be loatra ary matetika
Fiarovana ara-tsakafo - fomba fijinjana sy fanodinana, takiana amin'ny mari-pana, fepetra takiana amin'ny fahadiovan'ny mpiasa
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanombanana sy fanaraha-maso ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana amin'ny sehatry ny fiompiana - fitakiana, fampiharana, fahombiazana ary fanatsaranamanokatra fisie PDF